तपाईको सिरानीमुनी के छ ? वास्तुशास्त्र भन्छ, यी कुरा राखेर सुत्दा फलिफाप ! - Lokpath Lokpath
२०७६, ३१ भाद्र मंगलवार १६:५६
तपाईको सिरानीमुनी के छ ? वास्तुशास्त्र भन्छ, यी कुरा राखेर सुत्दा फलिफाप !
प्रकाशित मिति : २०७६, ३१ भाद्र मंगलवार १६:५६
यी टिप्सहरु पढ्नुभएको थियो
होसीयार ! अदुवा नखानुस् यी रोग भएकाहरुले (उपयोगी टिप्ससहित )
यस्ता व्यक्तिहरुले पटक्कै पैसा बचाउँन सक्दैनन्
यी ४ राशि भएका मानिससँग संसारकै अद्भुत शक्ति हुन्छ, तपाई नि पर्नुहुन्छ की !